टा’उको दु’खाईको स’मस्याबाट तुरुन्त रा’हत पाउन अपनाउनुहो’स् यी उपा’य - Nawalpur Dainik
टा’उको दु’खाईको स’मस्याबाट तुरुन्त रा’हत पाउन अपनाउनुहो’स् यी उपा’य
February 10, 2021 by Nawalpur Dainik
टा’उको दुखाईबाट धेरै जना पीडित हुने गर्छन् । चिन्ता, कामको चाप तथा विभिन्न वाह्य कारणले टा’उको दु’खाई हुने गर्छ । जसले हाम्रो दैनिक जीवनयापनमा नराम्रो असर पारिहेको हुन्छ । टाउको शरीरको संवेदनशील अंग हो । त्यसैले टा’उको दु’खाईलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने डा’क्टरहरु बताउँछन् ।
सामान्यतयाः मानिसहरु टा’उको दुख्ने वित्तिकै ‘पेन किलर’ खाने गर्छन् । सामान्य दुखाईमा नै ‘एन्टिवायोटिक’को प्रयोग गर्दा यसको ‘साइड इफेक्ट’ हुने र यसले विस्तारै गम्भीर असर देखाउने गर्छ । त्यसैले टाउको दुखाईबाट घरमै आराम पाउन हामी सामान्य उपचार गर्न सक्छौ जसले केहि क्षणमा नै राहत प्रदान गर्छ । तेलले मसाज गर्नुस्: यदि तपाईलाई बारम्बार टा’उको दुखिरहन्छ भने तपाईले तेलले मसाज गर्न सक्नुहुन्छ । क’पालको जरामा तेल लगाएर हल्का मसाज गर्ने गर्दा बारम्बार हुने टा’उको दु’खाईको स’मस्याबाट छुटकारा मिल्छ । यसका साथै नरिवल र बदामको तेल मिसाएर मालिस गर्दा पनि फाइदा मिल्छ । पिपरमेन्ट र युकेलिप्टसको तेल पनि टा’उको दु’खाईको लागि राम्रो औ’षधिको रुपमा लिइन्छ ।
गाईको दूध: टाउको दुख्ने स’मस्या दोहोरिरहन्छ र औषधिले पनि काम गरिरहेको छैन भने हरेक दिन गाईको मन तातो दूध पिउँने गर्नुस् तपाईंको टाउकोको स’मस्या विस्तारै कम हुँदै जान्छ । त्यस्तै ल्वाङमा नुन मिसाएर चुर्ण बनाउने र टाउको दुखेको समयमा उक्त चुर्ण र गाईको काँचो दूध टाउको मा लगाउँदा पनि टाउको दु’खाई तुरुन्तै कम हुन्छ । पानी: हल्का टा’उको दुख्दा एक गिलास पानी पिउँन सकिन्छ। आधा गिलास तातो पानीमा कागतीको रस हालेर पिउँदा टाउको दुख्न कम हुँदै जान्छ ।
धनियाँ र चिनी: ज्वरो वा रुघाखोकीको कारण टा’उको दुखेको हो भने धनियाँको पाउडर र चिनी मिसाएर झोल पिउँदा आराम मिल्छ ।कफि: कफिमा पाइने क्याफिनले दुखाई कम गराउँछ । जसले पेन किलरको काम पनि गर्छ । यसको प्रयोग माइग्रेन र टाउको दुख्ने रो’गका विरामीको लागि फाइदाजनक मानिन्छ । अदुवाको चिया: अदुवा हालेर बनाएको चिया पिउँदा पनि टा’उको दुखाई कम हुने गर्छ । अदुवामा एन्टी–इन्फ्लेमेटरी भन्ने तत्व हुने भएकाले त्यसले दुखाईलाई कम गराउँन मद्दत गर्छ । यसले तनाव, माइग्रेन जस्ता स’मस्यालाई भगाउँन सहयोग गर्छ ।
Prevजे गर्दा पनि चाँ’या गएन ? उसो भए एक पटक नु’नको प्र’योग गरेर हेर्नुहो’स्
Nextअ’नुहार गोरो र च’म्किलो बनाउन चाहनुहु’न्छ ? यी १५ मध्ये कुनै एक उ’पाय फलो गर्नुहो’स्